Shina: famonoan-tenan’ny mpianatra sangany iray hafa – ny tantaran’i Yang Yuanyuan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2020 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Italiano, Français, English
Nananton-tena tao amin'ny efitrano fandroany ny 25 Novambra 2009 i YANG Yuanyuan, 30 taona, mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Maritime ao Shanghai. Nilaza tamin'ny reniny izy ny andro mialoha ny namonoany tena fa tsy afaka manova ny lahatra ny fahalalàna .
Nirongatra ny famonoan-tena nataon'ny mpianatry ny oniversite Shinoa tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, indrindra ireo vao nahazo diplaoma sy dokotorà. Nahitana trangana famonoan-tena miisa 23 nataon'ny mpianatra tao an-tanàndehiben'i Shanghai tamin'ny taona 2008 ka 19 no maty. Tany Guangdong ny taona 2008 ihany dia nisy trangana famonoan-tena miisa 26 ka 21 no maty. Inona no antony ao ambadik'ireny trangana famonoan-tena rehetra ireny ? Mety hanazava momba ny olana atrehan'ireo sangany eo amin'ny fiarahamonina ny raharaha Yang.
Araka ny tatitra avy amin'ny 163.com, avy amin'ny fianakaviana reny tokan-tena i Yang. Ny reniny no nitaiza azy sy ny anadahiny ary niasa mafy izy ireo mba hisondrotana teo amin'ny fiainana tamin'ny alàlan'ny fianarana- Tao Shanghai i Yang no naka ny mari-pahaizana Master ary tao amin'ny Oniversite Peking ny anadahiny no naka ny mari-pahaizana dokotorà. Hatramin'ny nanesorana ny renin'i Yang tao amin'ny orinasa dia nijanona niaraka tamin'ny zanany vavy tany amin'ny trano fatorian'ny mpianatra tao amin'ny Oniversite Wuhan izy izay nanombohany ny fianarany. Niasa nandritra ny roa taona izy mba hamerenany ny trosa rehetra alohan'ny nanapahany hevitra hanohy ny fianarany amin'ny fakana diplaoma tany Shanghai. Tamin'ny vola kely voaangony no nangatahany fandriana iray fanampiny ho an'ny reniny tao amin'ny trano fatorian'ny mpianatra saingy nihomehezana izy ireo noho izy ireo avy any ambanivohitra. Nolavin'ilay mpiambina mihitsy aza ny fidiran'ny renin'i Yanga tao amin'ny efitra fatorian'ny mpianatra.
Nahazo fanehoan-kevitra maro be tao amin'ny Aterineto ny fahafatesan'i Yang satria nanjary nihasarotra ho an'ny olona manana mari-pahaizana amin'ny ambaratonga ambony ny mahazo sata ara-tsosialy izay niadin'izy ireo mafy. Nanjavona ny fahagagan'ny diplaoman'ny oniversite. Ilay bilaogera Hailing izay nitsetra an'i Yang dia niresaka momba ny elanelana misy eo amin'ny zava-bita eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny karama ao amin'ny fiarahamonina Shinoa tao amin'ny lahatsoratra nosoratany hoe iza no tokony handray andraikitra momba ny fahafatesan'ilay mpianatra nahazo diplaoma Yang Yuanyuan? :
Indraindray malemy sy marefo ny olombelona ka mety hamarana ny ainy amin'ny fanontaniana manahiran-tsaina iray na roa. Mety hoheverin'ny olona any ivelany fa mahavariana raha ny fianakaviana iray mahantra no mahavita maha-tafita ny zanany amin'ny diplaoma maîtrise sy dokotorà, saingy amin'ity fiarahamonina ity izay tsy afaka miantoka ny asa sy ny karama sahaza ny diplaoman'ny mpianatra dia iza no hiraharaha ny fianarana vitanao? Mifantoka bebe kokoa amin'ny tombontsoa izay entin'ny mpiasa kosa ireo mpampiasa etsy ankilany. Nahatonga ny voina ho an'ity fianakaviana mahantra ity ny zava-misy toy izany izay mbola mino hatrany fa hanatsara ny fiainany ny diplaoma ambony .
Bilaogera maro no nanameloka ny tsy fahampian'ny fangoraham-po eo amin'ny fiarahamonina. Ho valin'ny vaovao, nanamarika i netizen (123.232.*.*) fa:
Tsy ny fahantrana no namono azy fa ny mpampianatra sy ny mpiara-miasa ngetroka sy miavonavona manodidina azy, ireo izay tsy manana fangoraham-po mandrakizay.
Nizara hevitra mitovy amin'izany i SHI Sansheng ary nanakiana ny kolontsaina Konfiosianisma mihatsaravelatsihy :
Ny tsy fisian'ny feon'ny fieritreretana sy ny maha-olona amin'ny fomba fitondrana ny olona no hadisoana lehibe indrindra ho an'ny oniversite sy ny andrimpanjakana eto amintsika. Ahoana no mitranga matetika eto amin'ny fiarahamonintsika ireo voina ireo ? Kanefa mino ve isika fa firenena mifanaja amin'ny aterineto manana sivilizasiona efa ho 5000 taona? Mampianatra hatrany ny fitsipi-pitondran-tena ireo mpampianatra sy mpanao pôlitika kanefa mpamitaka tanteraka izy ireo raha ny tena zava-misy. Na dia tsara amin'ny lafiny maro aza ny toe-tsaina Konfiosianisma, rehefa ampiasaina hanakonana ny lafiny ratsy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika izany dia lasa fitaovana hamitahana olona.
Mazava tokoa fa tsy anjorombala eo amin'ny fiarahamonina toy ny mpiasa mpifindramonina na ny tantsaha ny olona manana mari-pahaizana ambony. Mampametra-panontaniana ny antony mahatonga ny olona nahita fianarana tena marefo ara-psikôlôjia? Namaritra ny voina hita taratra amin'ny rafi-pampianarana tsy mahomby sy ny fanabeazan'ny fianakaviana i REN Haiyong. Hoy izy ao amin'ny bilaogin-dahatsorany, “Ny fanehoam-pitiavana telo tsy hita” :
我认为，理解杨元元的绝望心理，应当首先懂得人的幸福感的三大来源，也就是“三情”，即：亲情、友情和爱情……我们的学校教育和家庭教育一直以来都有一个很大的缺陷，就是漠视人正常的感情需求，甚至把孩子们的读书求知和他们的情感需要对立起来，偏执地认为好孩子应 该一门心思读书，不能考虑情更不能考虑性。请教师们和家长们都能将心比心地、设身处地地为学生们、为孩子们想一想。尤其要 关怀女孩子，因为社会对女孩子更有一层情感压抑的要求，并把压抑的效果与道德品质的高低联系起来；好象一个女孩子只知道读书，对男孩子完全不感兴趣才是好 学生、好孩子。学习成绩越好的女生，在学校和家庭这样“纯洁”的要求下，就会更多地克制自己的情欲和性欲，也就会更多地压抑自己的正常情感需求。然而，人 的天性是无法改变的，人的忍耐也是有限度的，崩得太紧的弦，早晚是要断的。
Raha ny hevitro, mba hahatakarana ny famoizam-pon'i Yang dia tokony ho fantarintsika aloha ny loharanom-pifalian'ny olombelona miisa telo: ny fifankatiavan'ny fianakaviana, ny fifankatiavan'ny mpinamana ary ny fifankatiavan'olon-droa… Tsy mahalala ry zareo fa ilaina ny fifankatiavana. Mihevitra ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny fa manakana ny fanabeazana ny tanora ny fitiavana ary manamafy izy ireo fa ny fianarany ihany no tokony hifantohan'izy ireo. Tokony haka ny toerana misy ny mpianatra sy ny zanany izy ireo ary hanome fikarakarana manokana ho an'ny zazavavy. Mampihatra ny fitondran-tena mifototra amin'ny famerana ny ankizivavy amin'ny firaiketam-pitiavana ny fiarahamonina misy antsika – tsy afaka maneho fitiavana amin'ny zazalahy ry zareo ary tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fianarana mba ho tonga mpianatra modely. Noho izany, raha afaka fanadinana soamantsara ny ankizivavy dia vao mainka izy ireo hametra ny fitiavany sy ny faniriany ara-nofo. Na izany aza, tsy azo ovana ny natioran'ny olombelona. Misy fetrany foana ny fifehezan-tena ary ho montsana tanteraka raha toa ka henjana loatra.